राशिफल Archives - Samasta Khabar
17th May 2019 17th May 2019 avigo
मेष प्रतिस्पर्धी बढ्नाले अधिकार सुरक्षा गर्न जुट्नुपर्ला। परिस्थितिवश सानोतिनो समस्याले अल्झाउनेछ। मिहिनेतीहरूका लागि भने समय उत्साहजनक नै रहनेछ। वृष मिहिनेत गर्दा विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ। लक्ष्यअनुसार समयमै काम सम्पादन हुनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। विद्यामा वृत्ति, सहुलियत वा विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ। सहपाठीहरूलाई उछिन्दै पुरस्कार, प्रशंसा आदि प्राप्त गर्न सकिनेछ। मिथुन मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउनेछ । समाजसेवामा मन लाग्नेछ । शत्रु पराजित हुनेछन् । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। कर्कट धेरै खर्च र ठूलो प्रयत्न गर्नुपरे पनि राम्रै उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। चुनौती पन्छाउँदै सञ्चय…
16th May 2019 16th May 2019 avigo
मेष घरपरिवारमा झमेला आउन सक्ला, ख्याल गर्नुहोला । सरकारी संस्थाको डर रहनेछ । मिष्ठान्न भोजन हुनेछ । आफन्तको सहयोग प्राप्त हुनेछ । वृष वैवाहिक सम्बन्ध सुखमय हुनेछ । आँटेको कुरा पूरा हुने समय छ । व्यवसायमा पूर्ण लाभ मिल्नेछ । रमाइलो कार्यक्रममा सहभागी भइएला । मिथुन पूर्ण हुन लागेको काम बिग्रन सक्ला । सगंत खराब रहनाले आफैमा हानी हुन सक्ला । राम्रो कामको चर्चा चल्नेछ । जोश जाँगर बढ्नेछ । दाम, नाम कमाउने बेला छ । कर्कट प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। कर्मयोगले नयाँ मोड लिनेछ भने मिहिनेतले नाम, दाम र…
मेष हिम्मत गर्दा जटिल काम समेत सम्पादन हुनेछ। पुरुषार्थद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिनेछ। पहिले दुश्मनी गर्नेहरूले पनि मित्रताका हात अघि बढाउनेछन्। वृष जटिल ठानिएको कामसमेत सम्पादन हुनसक्छ । धार्मिक/सांस्कृतिक सभासमारोहमा सरिक हुने सम्भावना छ । घरमा अतिथीको आगमन हुनेछ । मिथुन सुखद समाचारले दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ। पढाइको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ र लेखन कलामा निखारता आउनेछ। अध्ययनका लागि भ्रमणको मौका जुट्न सक्छ। कर्कट इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण होला । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ । नजिकको मित्रसँग भेटघाट हुनेछ । दिनको उत्तरार्धमा केहि धनखर्च बढ्नेछ । सिंह परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्ता दु:ख…
मेष अस्वस्थ शरीर लिएर काममा जुट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। बाध्यात्मक परिस्थितिले इच्छाशक्ति कुण्ठित हुनेछ। आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय हुनेछन्। व्यापारिक लगानीमा जोखिम बढ्न सक्छ। वृष दिगो योजनाका साथ अघि बढ्दा बिस्तारै लाभ मिल्नेछ। मिहिनेतले पहिलेका कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। मिथुन पहिलेका समस्या दोहोरिनाले पनि अलमल बढ्न सक्छ। समयको तालमेल नमिल्दा योजना सम्पन्न नहुन सक्छ। जोखिमपूर्ण वा विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। कर्कट मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ आकर्षित बन्नेछ । पेसा र व्यवसायबाट…
आज १ बैशाख, २०७६ – आइतवारको राशिफल ! हेर्नुहाेस् आफ्नाे भाग्य ।
14th April 2019 14th April 2019 avigo
मेष कार्यमा अवरोध आउला । मालसामान हराउन सक्छ । घरायसी झमेलामा परिएला । आत्मबल बढाएर काम गरेमा असफल भइँदैन । वृष अवसरलाई पछ्याउन नसक्दा व्यवहारमा पछि परिनेछ। टाढिएका सन्तानलाई आमाको यादले सताउन सक्छ। शुभचिन्तकहरूको सुझावले फाइदा दिलाउनेछ। मिथुन दिगो योजनाका साथ अघि बढ्दा बिस्तारै लाभ मिल्नेछ। मिहिनेतले पहिलेका कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। कर्कट धर्म,कर्ममा रुचि, शुभ समाचार सुन्न पाइएला । मन प्रफुल्ल रहला । मिष्ठान्न भोजन प्राप्ति हुनेछ । नयाँ व्यक्ति संग भेटघाट हुनेछ । सिंह परिश्रमका तुलनामा प्रतिफल कम…
आज २५ चैत्र, २०७५ – सोमवारको राशिफल ! हेर्नुहाेस् आफ्नाे भाग्य ।
8th April 2019 8th April 2019 avigo
मेष राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। मिहिनेत गर्दा जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। वृष धार्मिक कार्य सफल रहनेछन । महिला वा मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउला । श्रमको उचित मुल्याङ्न हुनेछ । मिथुन बेसुरमा काम गर्ने बानीले अप्ठ्यारोमा परिनेछ। लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। अवसरका लागि केही दौडधुप गर्नुपर्ला। खर्च लागे पनि यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। कर्कट धनार्जनका स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । वित्तिय संस्थाबाट सहयोग पाईनेछ । आत्मबल बढाएर काम गरेमा असफल भइँदैन । सिंह नयाँ सवारी साधन…
आज २३ चैत्र २०७५, शनिवारको राशिफल ! हेर्नुहाेस् आफ्नाे भाग्य ।
5th April 2019 5th April 2019 avigo
मेष स्वास्थ्यमा तथा सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ । साहसिकताबाट धनार्जन हुनसक्छ । साँझमा आँटेको कम बन्नेछ । वृष विशिष्ठ व्यक्तिको साथ पाईनेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । कार्यमा सफलता पाईनेछ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । मिथुन निर्णायक मोडमा दुविधा उत्पन्न हुने समय रहेकाले सजग रहनुपर्ला। बेसुरमा वचन दिने बानीले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला। कर्कट बोलीको गलत अर्थ लाग्नाले मान–सम्मानमा आघात पुग्ने सम्भावना छ। विचार सम्प्रेषण गर्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला। श्रम परे पनि सोचेको मूल्य प्राप्त नहुन सक्छ। सिंह दाम, इनाम र प्रतिष्ठा…